Dawladda somaliya oo si kulul ula hadashay labada dhinac ee ku dagalamay muqdisho kuna wargalisay in joojiyaan dagaalka. | warsugansomaliya.wordpress.com
Dawladda somaliya oo si kulul ula hadashay labada dhinac ee ku dagalamay muqdisho kuna wargalisay in joojiyaan dagaalka.
Dawladda Somalia ayaa waxa ay ka hadashay Dagaalka iminka ka socda Magaalladda Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose.
Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya oo gowr dhow la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Dowladda ay aad uga xun tahay Dagaalka shalay ilaa iyo maanta ka socda Magaalladda Kismaayo.
Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu markale ku baaqayo in la joojiyo dagaalka kasoo Cusboonaaday Kismaayo, wuxuuna sheegay Afhayeenka in Dagaalka uu gaaray meel qaraaran.
Wuxuu sheegay in marxalada hada la joogo aysan wanaagsaneyn in lagu dagaalamo Magaalada Kismaayo,dhinacyada ku dagaalamaya Magaalada Kismaayana laga rabo inay joojiyaan dagaalka.
Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, ayaa waxa uu sheegay in Xukuumadda ay aad uga walaacsan tahay qaabka uu u socdo Dagaalka waxa uuna Afhayeenka sheegay in Ra’isul wasaaraha amray in bilaa shuruud lagu joojiyo Dagaalka lasii hurinaayo.
Ridwaan Xaaji Cabdi waxa uu sheegay in Xukuumadda Somalia ay go’aano deg deg ah kasoo saari doonto Dagaalka Kismaayo ka socda isagoona Tilmaamay in Ujeedka dagaalka uu yahay in lagu xasuuqo Shacbiga masaakinta ah ee magaladda ku dhaqan.
← War Deg Deg Ah Xasan Daahir oo mar kale Diiday in Muqdisho la keeno iyo labo katirsan Saraakiisha lasocota oo la xiray
Codsi Madaxweynuhu uu baarlamaanka u diray oo buuq fara badan dhaliyay iyo arinta oo meel xaasaasi ah mareysa. →